Umzobi woMhlaba weBrandon, uMyili kunye noMzekeliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje siza kukuxelela malunga noMhlaba waseBrandon umyili, umzobi kunye nomculi, waseSan Francisco, kule minyaka mibini idlulileyo ebenceda ukufundisisa uphawu lwe YeDropbox, ukuyila imeko yasekhaya yeMizekeliso. Emva kweDropbox usebenze njengomlawuli wobugcisa kwi Iqela loyilo lweFanele, UMoya kunye noAckerman McQueen.
Abanye babathengi ababaluleke kakhulu zezi: Ii-Airbnb, iiCollins, iDropbox, iFacebook, uGoogle, i-Instagram y Uber.
Su isitayela umzekeliso ubonwa kwisitayile esifakwe ngaphezulu kwe- Uhlobo lwendabuko lwe tattoo, Inombala omncinci wombala, imigca yobukhulu obufanayo kunye nezinto eziphindaphindayo, ezinjengee roses, iinkozi, iimela okanye iinkonjane, kwisitayile umzekeliso olula luphawulwa luluhlu oluncinci kakhulu lwemibala eneempawu ezilula, ezichanekileyo kunye nomgca womzekeliso onobuhlobo, ukhumbuza imizekeliso engakumbi yabantwana.
Ngokubhekiselele kumhlaba we uphawu ukuba kunokwenzeka, nokuba kubanzi ngakumbi kunomboniso ovela kwii-logo ezijolise kuzo unobumba, ezinye zenziwe lula ngakumbi kwi iimilo ezisisiseko, Abanye bayalinganisa ishicilela isitampu, Ezinye zibonakaliswa kukusetyenziswa kwe- umzekeliso wesandla, kodwa uhlala ugcina iikhonsepthi ezisisiseko zelogo.
Kwimeko yalo msebenzi uncede uCollins SF nge Ubukho be-Airbnb kwi iBrooklyn isiqingatha semarathon. Umsebenzi wakhe kule projekthi yayikukuthatha iikhonsepthi ezikhoyo ngakumbi kwaye aphindaphinde isitayile sendalo esenziwe ngu-Dark Igloo. Inkqubo ye- mze keliso zamiliselwa liqela loyilo lweCollins kwi ukusetyenziswa ezahlukeneyo njengemifanekiso.
Ngesicelo Uber ikhomishini yayiza kwenza uthotho mze keliso Ukuhlaziya iapp, kule meko ke umyili ukhethe ukuba isitayela enxibelelene ngokusondeleyo uyilo olusicaba.
Ukusetyenziswa ibhokisi lehlayo Kule meko kwinguqulelo yeselfowuni yenze uthotho lwe mze keliso kwi inkqubo yobhaliso Kwisicelo, kule meko imizekeliso ibinesitayile esinobuhlobo nesingakhathaliyo, esithi ubalise ibali esebenzisa uyilo kunye nomzekeliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobi woMhlaba weBrandon, uMyili kunye noMzekeliso